အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇွန် ၂၀၁၆ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇွန် ၂၀၁၆	14
ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ World Press Freedom Day (May 3) တွင် ယခုနှစ်အတွက် ဆောင်ပုဒ်- “သတင်းအချက်အလက်များရယူနိုင်ခြင်းနှင့် လူ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များဟူသည် သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်” “Access to information and fundamental freedoms: This is your right!”
မြန်မာတို့သည် လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တ၀က်မကအချိန်တွင် မိမိအစိုးရဘာလုပ်နေမှန်းမသိ၊ ဘာတောင်းရမှန်းမသိ၊ ဘာမှမရဖြစ်ခဲ့ကြရဖူးသည်။ လူ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များဟူသည်လည်း မသိ/မရှိခဲ့။ ယခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်တွင်ကား မြန်မာတို့အတိုးချယူကြ နှိုက်ကြနှင့် လှုပ်ရှားလွန်းနေဟန်ပင်ရှိလေသည်။ ရုတ်တရက်ပွင့်လင်းလာသော အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်အဆင့်လျှို့ဝှက်ချက်တို့လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာဖြစ်ကုန်သည်။ ၀န်ကြီးဌာနပင်မတည်ရသေး၊ သတင်းများမီဒီယာများသို့ရောက်နေ၏။ ၀န်ကြီးဖြစ်မည့်သူစာရင်းမှာ လွှတ်တော်သို့သမ္မတကပို့၍ အတည်ပြုချက်ပင်မယူရသေး ပေါက်ကြားနေလေသည်။ စစ်တိုက်ကြ၍ သွေးသံရဲရဲသေသူစစ်သားများပုံ၊ စစ်ရေးအချက်အလက်များသည်လည်း FB(Facebook) ပေါ်ချက်ချင်းတက်နေသည်။
တကယ်တော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတို့အစွမ်းဖြင့် ကမ္ဘာလူယဉ်ကျေးမှုသည်လည်း လူမှုတော်လှန်ရေးတရပ်သို့ ဦးတည်ပြောင်းညှိနေဟန်ရှိသည်။ ယခင်နှစ်၂၀ကျော်က စီအိုင်အေကဲ့သို့လူထောင်ချီအလုပ်လုပ်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းမှရှာပေးရသော အမေရိကန်သမ္မတတဦးရသည့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိသည်မျိုးကို သာမန်နိုင်ငံသားတဦးကပင်ရနေသောခေတ်ဖြစ်သည်။
မြန်မာတို့ လည်း လက်ကိုင်ဖုံးများနှင့် FBတက်နိုင်သည်။ ကာယံကံရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်မလိုပဲ ထိုသူ့ဓာတ်ပုံကောက်တင်နိုင်သည်။ မည်သူကိုမဆို တိုက်ခိုက်/ထိခိုက်နိုင်သည်။ တစုံတဦးက တဦးတယောက်ကို တိုက်ခိုက်လိုက်သည်ဆိုပါကလည်း တရားရုံးတက်၍ တရားရေးအဆုံးအဖြတ်မခံယူရသေး၊ တရားခံအမည်တပ်ခံရလျှက်နေလေသည်။
ဒေါသထွက်နေသောလူအုပ်ကြီးပေါ်လာတတ်သည်။ လူအုပ်စုအင်အားနှင့်ဖိသည်။ ကိုယ်ပွားကိုယ်ခွဲ FB Account များနှင့်ချွန်တွန်းသည်။ ထိုထို အကောင့်များမှရေးသည်။ ပစ်စာတင်သည်များကို အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက တိုက်ရိုက်ဖတ်သည်။ လိုက်လံအရေးတယူဆောင်ရွက်ကြသည်။ သို့နှင့် မြန်မာCyber လောကသားများ တဆင့်တက်ကြကာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အားနည်းသူများအားဖိအားပေးလေသည်။ ဖိအားကို အစိုးရက တင်းခံနိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်ကုန်၏။ လူထုအများစု၏အမြင်လောဟုမှောက်မှားကုန်သည်။ သို့နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်လာသည်။
ဘေးဆိုးထွက်အဖြစ် တရားဥပဒေအပေါ်၌လည်း လူတွေရောက်ကုန်သည်။
အမေရိကားတွင် တရားဥပဒေကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရသော အဖွဲ့အစည်းတို့သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာအရေး၊ ဓာတ်ပုံတို့ကိုအတည်ယူ၍ တရားရေးသက်သေတင်၍လည်းကောင်း၊ ဥပဒေရေးရာအရလည်းကောင်း၊ ကြိုတင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက် အရေးယူဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိပေ။ မြန်မာပြည်ကဲ့သို့ နုစဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် အစိုးရ၀န်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်တရားသည် ထိုထိုသူ၏ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ခွင့် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတို့နှင့် ရောထွေးကုန်လေသည်။ အလုပ်ချိန်ပြင်ပ၊ ပုဂ္ဂလိကမိသားစုအချိန်များတွင်လည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာဖွင့်ကြည့်ကာ တာဝန်ယူ တာဝန်ထမ်းနေသည့်သဘောပါ သက်ရောက်ကုန်သည်။ ဤသည်ကို ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာစည်းပေါက်သည်ဟုသာခေါ်ရန်ရှိသည်။ အစိုးရသည် မင်းကျင့်ဝတ်တရားရှိရာ၏။
ဆိုင်ရာတို့၏ ပရောဖက်ရှင်နယ်ဟုခေါ်သော ၀င်ငွေရသည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတိုင်းတွင် ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား၊ စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေသများကို ပြဌာန်းထားသည်။ Code of Ethics ဟုခေါ်သည်။ ထိုအချက်သည် ပြဌာန်းထားသော ဒဿနိကဗေဒပညာရပ်နယ်စာများဖြစ်၍ စာတွေ့မပြဌာန်းထားနိုင်သည်များလည်းရှိသည်။ လွန်စွာကျယ်ပြန့်သော ဘာသာတရားဆိုင်ရာတို့သာတည်း။
ဒီမိုကရေစီ၏အခြေခံကျင့်ဝတ်တွင် “တခြားသူများကို ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိသမျှကာလပါတ်လုံးမိမိဘ၀ကိုနှစ်သက်သလိုနေထိုင်နိုင်သည်။” ဟုပြဆိုထားသည်။
သို့ဆိုသော် မည်သူမှမထိခိုက်ဟုဆိုကာ မိမိအိမ်ရှိလျှပ်စစ်မီးများအကုန်ဖွင့်သုံးစွဲခြင်း၊ ရှားပါးသတ္တ၀ါများအား ၀ယ်ယူသုံးစွဲစားသောက်ခြင်း၊ စားသောက်ဆိုင်များတွင် အစားအသောက်များ ပိုလျှံစွာမှာယူပြီး ချန်ထားခဲ့ခြင်းများကို မိမိငွေပေးနိုင်သည်ဆိုကာလုပ်သင့်သည်လော။
မိမိကြောင့် ကမ္ဘာသယံဇာတများအလဟဿမဖြစ်ရန်၊ တိရိစ္တာန်သစ်ပင်ပန်းမာန်မျိုးဇီဝများ မဆုံးရှုံးရန်၊ လေထုဂေဟစနစ်မထိခိုက်ရန်၊ စားရေရိက္ခာများအကြောင်းမဲ့မကုန်ခန်းရန်စသဖြင့် လူသန်း၇ထောင်ကျော်နေပြီဖြစ်သော မနုဿလူသားများက အစားပြန်မရနိုင်သော ဤမြေကမ္ဘာအတွက် စောင့်ထိမ်းပေးရမည့် ကျင့်ဝတ်များလည်း ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာသူ/သားများ၏ ကိုယ်ကျင့်သီလတရားဖြစ်တော့သည်။ နိုင်ငံကြီးသားစိတ်ဟု ခေါ်ချင်ခေါ်မည်။
သင့်ကြောင့်ဤကမ္ဘာ မပျက်စီးသွားနိုင်သော်ငြား ယိုယွင်းလာသော မြေကမ္ဘာကျမ်းမာရေးတွင် သင့်ကြောင့် ဖျက်စီးတွန်းအားတခုမရစေလိုရင်းဖြစ်ပါ၏။
ထွေးပွေ့ဖက်ကိုင် Free Hugs ကမ်ပိန်း ရန်ကုန်တွင်လုပ်ကြသည်။ ဆဲဆိုစာများကား မြင်ဖတ်၍ပင်မကောင်း။
ခရစ်ယန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမြေနေရာကို ဖြိုဖျက်ဝင်ရောက်၍ စေတီတည်သည်။ ၀ိနည်းနှင့်ညီပါသလော။ ကချင်ပြည်နယ်နေ ပြည်သားတို့ တိုင်းရင်းသားတို့အခွင့်အရေးကို ကျော်လွန်၍ အခြားပြည်နယ်သားတို့ကမြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းများကိုကန့်ကွက်သည်။ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးရှိသလော။
လူမျိုးစုတခုက သူတို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်အမည်ပေးတခုသတ်မှတ်သုံးစွဲစေသည်။ ကန့်ကွက်ရန်အခွင့်ရှိသလော။
တန်းမစီပဲကျော်ဖြတ်တတ်သည်။ လူကြားထဲတွင် ပါးစပ်ဖွင့်ထုတ်လျှက် ချောင်းဆိုးသည်။ တံတွေး၊ ကွမ်းတံတွေးလမ်းပေါ် ဗျစ်ထွေးသည်။ လူကြားတွင် အသံဟစ်အော်စကားပြောသည်။ မျက်လုံးကွယ်သူကို အကန်းခေါ်၍ စကားမပြောနိုင်သူကို ငအဟုခေါ်သည်။ အသားအရောင်၊အ၀တ်အစား၊ယူနီဖောင်းဖြင့် လူ့တန်းစားသတ်မှတ်သည်။ငွေမရှိလျှင်အောက်တန်းစားဟုယုံကြည်ကြသလို ငွေရှိလျှင် သူခိုးဟုသမုတ်တတ်ပြန်သည်။ အမျိုးဘာသာစောင့်ရှောက်သည်ပြောလျှက် ဘုရားစေတီအထက်ပစ္စယံမိန်းမ,မတက်ရ ဆိုင်းဘုတ်တင်တတ်သည်။ မိန်းမ၏အ၀တ်အစားလုံခြုံခြင်း၊ ဖိုမခွဲခြားခြင်းတို့နှင့်သာ ယဉ်ကျေးမှုဟု သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသီချင်းများကို အခကြေးငွေယူကာ ကော်ပီကူးသီဆိုကိုယ်ပိုင်လုပ်သည်။ ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲများကို တရားမ၀င် သိလျှက်ခိုးသုံးသည်။
မြန်မာတို့ လောကပါလတရားတို့ ကျွံခဲ့ပြီလော။ အစွန်းရောက်ခဲ့ပြီလော။ ရှေးဆုံးမစာတို့နှင့်ညီသလော။
ဟက်ကာတို့သည် သူတပါး၏ကွန်ပြူတာကိုထိုးဖေါက် ၀င်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
သို့သော် သူတကာ၏ကွန်ပြူတာသို့ လက်တည့်စမ်း ၀င်ဖေါက်ယူ၍ အကြောင်းမဲ့ထိခိုက်အောင်လုပ်သူတို့အား ယုတ်ညံ့သူဟက်ကာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သီလစောင့်သူသည် အသေးဆုံးသီလကိုပင်လုံအောင်ထိန်းကာ မိမိစိတ်ကိုမြှင်တင်သည်။
စိတ်တန်ခိုးရှင်များသည် မိမိ၏ စိတ်စွမ်းအင်တို့ကို အကြောင်းမဲ့အသုံးမချတတ်။ စည်းရှိရ၍ စည်းဖေါက်လျှင် ဘုန်းနိမ့်သွားမည်သာတည်း။
Lao Tzu, Dialectic နှင့် Buddha
The Basic Laws of the Dialectic တွင်တော့..
The Law of the Transition of Quantitative Changes into Qualitative ဟုရေးထားသည်။
အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် (အကျင့်)လုပ်ပါလျှင် (မှားသည်မှန်သည်ဖြစ်စေ)အရည်အချင်းတက်လာမည်ဖြစ်သည်။
လောက၌ မကောင်းမှုပြုသောသူအား ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်မည်သည် မရှိ။ မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ မိမိပြုသောအမှုကို မိမိကိုယ်တိုင် သိ၏။ (တိကအင်္ဂုတ္တိုရ်၊ ၄-ဒေ၀ဒူတ၀ဂ်)
မြန်မာတို့တွင် အာဏာရှင်တို့အဆက်ဆက် စိတ်ဓာတ်ဆင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာများလွန်စွာကျဆုံးနေခဲ့သည်ကို တွေ့ရလေသည်။
သူတပါး၏ ပုဂ္ဂလိက အခွင့်အရေးများကိုလည်း ကျူးလွန်းလှသည်။ မည်သူမသိ ကိုယ့်ကိုယ်စောင့်နတ်တော့သိနေမည်သာတည်း..။
ကာယကံ၊၀စီကံ၊မနောကံ၊ ကံ.. အလုပ်တိုင်းတွင် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာထပ်ပါစေ။ သိက္ခာသီလနှင့်အထပ်ထပ်အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပါလေ..။
ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာမြင့်မားလာသောသူသည် မိမိ၏ ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး ကိုယ့်သမိုင်းကောင်း ကိုယ်ရေးနိုင်မည်သာ။
သို့နှင့် ကောင်းသော သင်၏ကံကြမ္မာကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူသွားနိုင်မည်။ It becomes your destiny!
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: သမိုင်း ကောင်းချင်ရင်တော့
ထုံးစံတိုင်း ဂုံးကျော် တံတားထိုးမှ ရပါမယ် ဆရာ
ဒါဆို ကျိုက်ဝိုင်းမှာ ထပ်ပိတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဆရာ
Thint Aye Yeik says: .ရေးသားချက်သည်ကား… ပြောင်မြောက်၏….
သိုသော်…ဆောင်းပါးသည်ကား… အလွန်တရာ ရှည်လှစွာ၏။
kai says: သတင်းစာထဲထည့်တော့..
ဒီထဲလာဆွေးနွေးတာတွေရှိရင်.. ရောသမမွှေ ပြန်တည်းဖြတ်ပြီး.. တိုပလိုက်တာလေ..။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကောင်းအောင်
ငွေနဲ့ရင်း ငွေနဲ့စမ်းပြီး ပြု ပြင်နေမဲ့အစား
ကိုယ်စောင့်နတ်တွေ ဘုန်းတန်ခိုးတွေ စိတ်တန်ခိုးတွေနဲ့
ခြောက်လှန့် မြူ စွယ်တာကမှ ဟုတ်တုတ်တုတ်နော့
kai says: Lao Tzu, Dialectic နှင့် Buddha လို့ပါဆိုနေမှ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Free Hug ဆိုတာ ရဲ့ အစ က အင်္ဂလိပ်တိုင်းပြည် ကနေ သူ့ရပ်ရွာ အော်ဇီ ကို ပြန်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက် က စတာလို့ ဖတ်ရတယ်။
လေဆိပ်ရောက်တော့ လာကြိုနေကြတဲ့ မိသားစု တွေ နဲ့ ဖက်ယမ်းနမ်းရှုံ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ တစ်ခြားသူတွေ ကို ကြည့်ပြီး ကြိုသူမရှိ တဲ့ သူ့အဖြစ် ကို ဝမ်းနည်း သွားပြီး သူ့လို ခံစားချက်မျိုး ရှိနိုင်တဲ့ လူ တွေ အတွက် ရင်ခွင် တစ်ခု ဖန်တီး ပေးဖို့ ဖြစ်သွားခဲ့ တာပါ တဲ့။
အဲဒီလို မျိုး ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ပဲရစ်အကြမ်းဖက်မှု ပြီးတော့ မူဆလင် တစ်ယောက် က သူ့ကို ယုံရင် ဖက်လိုက်ပါ ဆိုပြီး ပြောတာ ကို လူပေါင်းများစွာ ဖက်ပေး ခဲ့ကြတယ်။
ကိုယ်တောင် တွေ့ရင် သွားဖက်ပေးလိုက်မှာ သေချာပါတယ်။
ဟိုးတစ်ခါ မူဆလင်မလေး တစ်ယောက် ကို ဘေးက နေ လမ်း အတူလျှောက်ပေးခဲ့ တဲ့ လူဖြူ အမျိုးသမီး ကိုလဲ လေးစားမိခဲ့ သေးတယ်။
သူတို့ လုပ် နေတာ တွေ က ရင်ထဲ စိတ်နှလုံး ထဲ က တကယ်ခံစားကြရလို့ လုပ်နေကြတာပါ။
မြန်မာပြည် ထဲ မှာလဲ တကယ်ရည်ရွယ်ချက် ကောင်း နဲ့ လား၊ ပေါ်ပင် နာမည်ကြီး ဖို့လား ကွဲပြားဖို့ လိုပါမယ်။
အခုချိန် က ရွှေပြည်ထဲ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ထွန့်ထွန့်လူး နေကြချိန်မှာ ဒီလို လုပ် ရင် ဘာ တွေ ဆက်ဖြစ် နိုင်မယ် ဆိုတာ ကိုမျှော်ကြည့် နိုင်ကြ ရင် တစ်ချို့ ကိစ္စ တွေ က ရိုးရိုးသားသား လို့ ကို မထင်မိဘူး။
ဘယ်လို အဖွဲ့၊ ဘယ်လို လူ တွေ က လုပ်နေလဲ ဆိုတာလဲ လေ့လာကြည့် ကြပါ။
ပြီးမှ အားပေးသင့်လဲ အားပေးကြတာပေါ့။
ကဲ ကွယ်။ အမှန်အကန် ဘဲ ထားပါဦး။
ဒီလောက် ပူပြီး ချွေးတစ်လုံးလုံး မှာ အသားချင်းထိရင် တောင် မခံချင်တာ။
လူချင်းပူးပြီး ဖက်ရရင်ဖြင့် တွေးမိတာ နဲ့ အတော် စိတ်အိုက် လှပြီ။
မိုးတွင်း ဆောင်းတွင်းလေး မှ လုပ်ပါတော့လား။ ဘာလို့ အခုချိန် နွေခေါင်ခေါင်ကြီး ထဲ ထ လုပ်နေကြလဲ မသိ။
ဒီကြား ထဲ ကိုယ့် ရွှေမြန်မာ တစ်ချို့ ရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ က လေးစားဖွယ် ဆိုတော့ ကာ
ရောင်းသူမဲ့ ပိုက်ဆံဘူး ကြီး အလစ်သုတ်သွားသလိုမျိုး နမူနာ အတိုင်း ကိုယ့်ကို ဟိုဟိုဒီဒီ ကိုင်သွားနိုင်တာ တွေလဲ ရှိဖို့ များပါတယ်။
ဒါကို အဖက်ခံ မဲ့ မိန်းကလေး များ သိထားသင့်တယ်။ လူရွေးပြီး အဖက်ခံ ရင်တော့ မသိ။
သူများ တွေ လုပ်တာ ကိုင်တာ ကို အတုယူတာလဲ ယူကြတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အဆင့်မကျော် သေးဘဲ စိတ်ဓာတ်လေးတွေ လူစဉ်မှီ အောင် ကိုယ့် နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အခြေခံ ကနေ စကြဖို့ မသင့်ဘူးလား။
အမျိုး ဘာသာချစ်ကြီး များ ခလုပ် မတိုက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းမျိုးပေါ့။
ရှာကြည့်ရင် ကိုယ့် ယဉ်ပါးနေကျ အလေ့ အကျင့်ထဲ မှာ ကို အများကြီး ရှိပြီးပါလေ။
မြန်မာတွေ သနားကြင်နာတတ်ကြောင်း သတင်းကြီး တာ ဟိုး ပဝေသဏီ ထဲကပါဘဲ။
အရင်ဆုံး ဘတ်စကား ပေါ်မှာ ကိုယ့် ထိုင် နေရာ ရ နေရင် တစ်ခြား သူ ကို ထိုင်ခိုင်း တာ လိုမျိုးပေါ့။
ကိုယ့်ရှေ့မှာ လမ်းကူးဖို့ စောင့်နေတဲ့ လူကြီး တွေ ကို ကူပြီး လမ်းကူးပေးတာမျိုးပေါ့။
ကျန် topic တွေလဲ ပြောချင်ပေမဲ့ တော်ပါပြီ။ :-)))
kai says: Hug လုပ်တာ.. ဘယ်သူမှထိခိုက်တာမဟုတ်.. ဆိုတာမျိုးက.. ကမ္ဘာအနှံ့ပြဖူးနေပြီပဲ..။
သင်ပုန်းမှာပေးချင်တဲ့ Message က.. သူ့တို့ဖာသူတို့.. အဖက်ခံကမ်ပိန်းလုပ်နေတာကို.. တပါးသူကဆဲဆို.. တားမြစ်ဖို့အခွင့်မရှိဖူးဆိုတာလေးပါ…။
မိန်းကလေးတယောက်က.. free Hugs ကမ်ပိန်းလုပ်တာကတော့.. ရှားမယ်ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အများပြည်သူ ကို မထိခိုက်သ၍ ကြိုက်သလို လုပ်နိုင်တာ တောင် မှ မလုပ်သင့် တာမျိုး တွေ ရှိတာကို သူကြီး ဘဲ ကျင့်ဝတ်နှင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ အပိုဒ် မှာ ပြောခဲ့ပြီးလေ။
ကမ်ပိန်း တွေ လုပ်တာ မပြောလိုပါဘူး။
ကျွန်မ ပြောလိုတာက အဲဒီ ဖက်ကမ်ပိန်း ကို လုပ်သူ နဲ့ ဆဲဆိုပြီး ဆူပူချင်သူများ တစ်ဂိုဏ်း ထဲ ဖြစ်နေမှာ ဘဲ စိုး ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ များ အတွက် အခွင့် တောင်းသူ များ ဟာ အမျိုးဘာသာ စောင့် သူများလဲ ဖြစ်နေတတ် သလိုပါဘဲ။
အခုဘဲ သတင်းထဲ မှာ အတူတစ်ကွ လမ်းလျှောက်ပွဲ တဲ့ လုပ်ပြန်ပေါ့။ ကြည့်ပါ။ တစ်ပါတ်တစ်မျိုး မရိုးရလေအောင် ဆွပြကြပါလိမ့်မည်။
လူအများစု က လဒူ တွေ မဟုတ်တာမို့ သူတို့ ကို လစ်လျုရှု နေကြတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ခေါင်းမခဲစေချင်ပါ။
အသေးလေး တွေ က ဟိုနား ဒီနား ပွ နေလေတော့ အလုပ်လုပ် ရတာ သိပ်တော့ ဖြောင့်ဖြူး မနေဘူးပေါ့။
သူ့မှာ အများကြီး အရေးကြီး တဲ့ စိမ်ခေါ်မှု တွေ ကို ရှိနေတာပါ။
ဒီတော့ ရိုးရိုးသားသား ကမ်ပိန်း သူ များ ဆိုရင်လဲ အလိုက် အထိုက် အချိန် အခါ နေရာ ဒေသ ကြည့် ကြဖို့ ပြောတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ တော့ မထင်ပါ။
ဒီအချိန်မှာ ကြွ ပြ နေသူများ အားလုံး ဟာ တိုင်းပြည် အတွက် ခလုတ် တွေ လို့ ဘဲ ကျွန်မတော့ သတ်မှတ် ပါတယ်။
pooch says: ပြောနေကျစကားကို အက်ကြောင်းထပ်တယ်လို့ပဲ ဆိုဆို အရိုးရင့်နေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ကျင့်ဝတ်တွေ စောင့်ထိန်းဖို့ လူသားချင်းစာနာတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်တွေ ပြောင်းလဲလာဖို့ ဆိုရင် ပညာရေးကို အမြစ်လှန်နိုင်မှ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
အဲ့တော့ လမ်းမှန်တဲ့ ပညာရေးတခု ကို စတင်အကောင်ထည်ဖော်တော့မဲ့ အချိန်မှာ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။
စနစ်ကောင်းရင် အမှိုက်ကိုတောင် ခွဲပစ်တတ်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး( ဒေါ်ဒေါ်ရေးတဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးပြောတာ )
အမှားအမှန်တွေ အတွက် အမှန်တကယ် အရေးယူမဲ့ ဥပဒေတွေ အသက်ဝင်လာလို့ကတော့ ညီညာရင် အချိန်တိုတွင်း ပြည်သာနိုင်ပါတယ်
kai says: ဘက ပညာရေးနဲ့စပေးနေတယ်လေ…
ကြာလေလေ… စိုးလေလေ….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: Free hug တာလဲ Hug ပေါ့
ဇေရဲထက် လက်လဲ ကြည့်ရှောင်ပေါ့နော
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သဂျီးက သတ္တိတစ်မျိုးကောင်းတယ်။ မျှစ်ကြော်ဆိုရင် ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း မရေးရဲဘူး။ ဘရိတ်အုပ်ထားတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်ကလည်း ပြောတယ်။ မင်း ဖေ့ဘွတ်သုံးရင် ဘာသာရေးကို လုံးဝ သွားမထိပါနဲ့တဲ့။ မင်းရဲ့စာရေးဆရာ ဘ၀ နိဌိတံသွားလိမ့်မယ်တဲ့။
uncle gyi says: ဘုရားဟောနဲ့မကိုက်ညီ(ကိုယ့်ရဲ့နားလည်သဘောပေါက်သမျှပေါ့)ပေမဲ့
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: https://www.facebook.com/maha.mingyi/videos/1302545466426350/?pnref=story